Shilalka Diyaaradaha Ee Adduunka Ka Dhacay Shantii Sannadood Ee U Dambeeyey - Waadinews | Somali News and Entertainments | Waadinews | Somali News and Entertainments
March 12, 2019 | Published by: khadar
Halkan waxaan idinkula wadaagi doonaa shilalkii diyaaradeed ee dunida ka dhacay Shantii sannadood ee u dambeeyey. Shilalkii diyaaradaha ee dhacay sannadkii 2018: 1) 29-kii October, 2018, diyaarad Boeing nooceedu yahay Max37 ayaa ku burburtay badda Java wax yar uun kaddib markii ay ka haadday garoonka diyaaradaha ee caasimadda Indonisia ee Jakarta.
Waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu dhammayd 189 ruux, Shilkaas waxaa loo aaneeyey cilad farsamo. 2) 18-kii May, 2018 Waxaa dhacday diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 wax yar uun kaddib markii ay ka duushay garoonka caalamiga ah ee Jose Marti oo ku yaalla Havana, waxaa ku dhintay 112 waxaana ka badbaaday hal ruux.
3) 11-kii April, 2018 Diyaarad milatari ayaa burburtay markii ay ka kacday duleedka caasimadda Aljeeriya, waxaa ku leeday 257 ruux oo ay ka mid yihiin shaqaalihii diyaaradda, dadka dhintay ayaa u badnaa askar iyo qoysaskoodii. 4) 12-kii March, 2018 diyaarad ayaa burburtay markii ay ka dagaysay garoonka Kathmandu, Waxay sidday 71 rakaab ah iyo shaqaalaheedii waxaana ku dhintay in ka badan 50 ruux.
5) 18-February, 2018 diyaarad nooceedu yahay Airman Airlines ATR ayaa ku dhacday Iiraan, waxaa ku dhintay 66 ruux. 6) 11- February, 2018 diyaarad Ruushku leeyahay ayaa burburtay waxyar uun kaddib markii ay ka duushay madaar ku yaalla Moscow, waxaa saarnaa 71 ruux.
Sannadkii 2017 waxa uu ahaa sannadkii ugu badbaadada badnaa dhinaca shilalka diyaaradaha waayo ma dhicin wax shil-diyaaradeed ahi. Shilalkii diyaaradaha ee dhacay sannadkii 2016: 1) 25-kii December 2016, Diyaarad sidday askar, iyo fannaaniin iyo saxafiyiin doonayey in ay soo maaweeliyaan ciidanka Ruushka ee ku sugan Suuriya ayaa dhacday waxyar uun kaddib markii ay ka duushay garoon u dhaw magaalada Sochi.
Waxaa ku halaagsamay dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu gaadhaysay 92 ruux. 2) 7-dii December, 2016, diyaarad ay leedahay shirkadda duulimaadyada Pakistan ayaa ku burburtay Waqooyiga dalkaas waxaa ku dhintay 48 ruux oo saarnaa.
3) 28-dii November, 2016, Shidaalkii ayaa ka dhammaaday diyaarad sidday koox kubbadeed u dhashay dalka Brazil, waxaa ku dhintay 71 ruux waxaa k badbaaday 6 ruux. 4) 19-dii May 2016, Madaxweynihii Francois Hollande ayaa xaqiijiyey in diyaarad ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee Masar oo lagu waayey inta u dhaxaysa Paris iyo Qahira ay burburtay kuna dhinteen 66-kii ruux ee saarnaa.
5) 19-kii March, 2016, Diyaar ay leedahay Fly Dubai oo nooceedu yahay Boeing 737-800 ayaa ku dhacday Ruushka, waxaana ku dhintay 62 ruux oo saarnaa. Shilalkii diyaaradaha ee dhacay sannadkii 2015: 1) 13-kii October, 2015, diyaarad Airbus ah oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee Ruushka, ayaa ku dulburburtay lama dagaanka Siinay oo ka tirsan Masar,
waxaa ku dhintay 224 ruux oo saarnaa, Kooxda Dawladda Islaamka ayaa sheegatay inay soo rideen diyaaraddaas. 2) 30 June, 2015, Diyaarad qaadda Milatariga Indonisia ayaa ku dul burburtay goob la dagan yahay waxaa ku hdintay 122 ruux oo saarnaa iyo 19 dhulka joogay. 3) 24-kii March, 2015, diyaarad Airbus ah ayaa ku burburtay buuraha Alab ee Faransiiska waxaa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu ahayd 148 ruux.
Shilalkii diyaaradaha ee dhacay sannadkii 2014: 1) 28-kii December, 2014 waxaa la waayey diyaarad ay leedahay shirkadda Air Asia oo u kala gooshaysay Indonisia iyo Singapore, waxaa la aamisan yahay inay ku dhacday badda Java, waxaa saarnaa 162 ruux. 2) 24-kii July,2014,
Waxaa la waayey diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Aljeeriya waxay dul maraysay Mali, waliba meel u dhadhay xuduud Burkina Faso, waxaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa oo ahaa 116 ruux. 3) 23-kii July, 2014, 48 ruux ayaa geeriyooday kaddib markii ay burburtay diyaaraddii ay saarnaayeen oo ka tirsanayd shirkadda diyaaradaha ee Taiwan,
Waxaa saarnaa 54 rakaab ah iyo 4 shaqaale ah, Markii kowaad ayey ku guul daraysatay inay fadhiisato isku daygii labaadna way dhacday. 4) 17-kii July, 2014, diyaarad ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee Malaysia ayaa ku burburtay Bariga Ukraine, waxaa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu dhammayd 298 oo ruux,
xukuumadda Ukraine ayaa shilkaas ku eedaysay fallaago gacan-saar la leh Ruushka. 5) 8-dii March, 2014, waxaa la waayey diyaarad ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee Malaysia, waxay u kala gooshaysay Kuala Lumpur iyo Beijing. 6) 11-kii February, 2014, diyaarad milatari ayaa ku burburtay goob buuralay ah oo ku taalla Waqooyi Bari Aljeeria waxaa saarnaa 78, waxaana ka badbaaday Hal ruux.